Breaking : त्रिभुवन विमानस्थलमा प्लेन क्र्यास ! (भिडियोसहित)
ARCHIVE, SPECIAL » Breaking : त्रिभुवन विमानस्थलमा प्लेन क्र्यास ! (भिडियोसहित)
प्रहरीले दिएको जानकारी दिए अनुसार विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको विमानमा रहेका १४ जनाको उद्दार गरिएको छ । उनीहरुलाई अस्पताल पठाइएको छ । उद्दार जारी छ । तर, विमानमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
यसबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ ।
फोटो सौजन्य : प्रशान्त अर्याल र विष्णु सापकोटा